Ku saabsan | Cilmi baarista Minnetonka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Fursad Hal-nooc ah
Fursadan shaybaarka goobta ku taal, oo u gaar ah aag kasta oo dugsi sare ah, waxay isku xireysaa ardayda dardargelinta la-hawlgalayaasha warshadaha iyo Ph.D. la taliyayaal heer sare ah oo khibrad u leh aagga ardayga ee cilmi baarista inta lagu jiro sanad dugsiyeedka.
Iyadoo loo marayo barnaamijka cilmi baarista ee Minnetonka, ardayda waxay fursad u heli doonaan inay weydiiyaan su'aalo iyaga muhiim u ah. Waxay la shaqeyn doonaan la-hawlgalayaasha warshadaha waxayna la xiriiri doonaan lataliyeyaasha jaamacadda. Ardayda Minnetonka waxay fursad u heli doonaan inay la kulmaan daraasadda cilmiga sayniska ugu horumarsan ee taariikhda Dugsiga Sare ee Minnetonka.
Koorsooyinka Cilmi Baarista
Laba koorso oo cilmi baaris cilmiyeed ah ayaa loo heli karaa ardayda si guul leh ku dhammaystay koorsada sayniska ee IB ama AP: Cilmi-baaris cilmiyeed ayaa loo heli karaa soonayaasha dugsiga hoose, dhexe iyo waayeelka ee Minnetonka; Cilmi-baarista Sayniska II waxaa heli kara ardayda da'da yar iyo kuwa waayeelka ah.
Qiimeynta ku saleysan kartida
Cilmi baarista Sayniska I iyo II waa koorsooyin gaar ah manhajka Dugsiga Sare ee Minnetonka. Macallimiintu waxay qiimeeyaan ardayda Cilmi-baarista inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka iyagoo adeegsanaya Qiimeynta ku saleysan Kartida . Liiskan la aasaasay ee aqoonta asaasiga ah waxaa lagu soo saaray aragti ka timid hoggaamiyeyaasha caalamiga ah ee qaybta cilmi baarista, oo matalaya xirfadaha iyo kartida ardayda ay u baahan doonaan inay ku guuleystaan cilmi baareyaasha Qarniga 21-aad.
Abuuritaanka Jiilka xiga ee Baarayaasha
Ardayda cilmi baarista waxay xushmeeyaan xirfadahooda xalinta dhibaatooyinka, iyagoo balaadhinaya aqoontooda maadada. Tababbarka khabiirka ah, ardayda waxay ushaqeeyaan iskaashi si loo horumariyo waqtiga dhabta ah iyo xirfadaha jawaab celinta degdegga ah ee lagu dabaqi karo adduunka dhabta ah.
A hogaaminta-gees, cadaadis-diidmo, shaybaar qoyan wuxuu ardayda siiyaa meel iyo waqti ay ku daba-galaan cilmi-baaris cilmiyeed dhab ah meelaha ay xiiseynayaan. Ardaydu waxay galaangal u leeyihiin sheybaarka kahor, inta lagu jiro, iyo kadib iskuulka iyo maalmaha fasaxa. Arday kasta wuxuu yeelan doonaa keyd shaybaar si uu u sameeyo tijaabooyin waqti dheer ah. Qalabka takhasuska leh waxaa si deeqsinimo leh ugu deeqay Cargill.
Ardaydeenu waxay soo jeediyaan su'aalaha cilmi baarista waxayna horumariyaan naqshadahooda tijaabada ah. Waxay sameeyaan daraasado suurtagal ah waxayna abuuraan miisaaniyad. Waxay ururiyaan oo ay falanqeeyaan xogta, ka dibna sawiraan oo difaacaan gabagabada. Waxaas oo dhami waxay ka dhacayaan xarunteenna cusub ee cilmibaarista u gaarka ah oo ay ku jiraan keydka shaybaarka qoyan iyo meel "hub" ah oo dabacsan oo loogu talagalay shaqada iskaashiga iyo bandhigyada.
Wax badan ka baro cilmi baarayaasha ardayda adoo adeegsanaya "Beyond Glass," barta ardayga ee Minnetonka Research.
Akhriso Blog-kayaga Ardeyda "Muraayadaha Dheer"
Agaasimaha cilmi baarista Minnetonka
Minnetonka Cilmi baarista /